လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်အလုပ်မဖြစ်သောပြCopနာသည်လိင်တူမေထုန်များတွင် Cybersex စွဲလမ်းမှုကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည် (2015) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
Cyberpsychol ပြုမူနေ Soc Netw ။ 2015 စက်တင်ဘာ 16 ။
Laier ကို C1, Pekal J ကို1, ကုန်အမှတ်တံဆိပ် M က1,2.
ဘာစွဲ (CA) အများအားဖြင့်လိင်ကွဲအထီးအတွက်စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ မကြာသေးမှီကတွေ့ရှိချက်, CA ပြင်းထန်မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား၏ညွှန်းကိန်းများအကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့သရုပ်ပြနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်, CA ရောဂါလက္ခဏာတွေအကြားဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့ကြောင်းပါပြီ။
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားတစ်နမူနာ၌ဤဖျန်ဖြေခြင်းကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ခုနစ်ဆယ်ဦးတည်းလိင်တူဆက်ဆံသူယောက်ျားပေါင်းအွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ မေးခွန်း, CA, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလှုံ့ဆျောမှု, ပြဿနာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်စစ်မှန်သောဘဝနှင့်အွန်လိုင်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုမှ sensitivity ကိုလက္ခဏာတွေအကဲဖြတ်။ ထိုမှတပါး, သင်တန်းသားများကိုညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ရှုအားပေးနှင့်ဗီဒီယိုတင်ဆက်မှုမီနှင့်အပြီးသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထညွှန်ပြ။ ရလဒ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများအားဖြင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှား၏, CA လက္ခဏာတွေနှင့်ညွှန်းကိန်းများအကြားခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုပြသခဲ့သည်။
, CA အော့ဖ်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကျဘာအသုံးပြုမှုကိုအချိန်နှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအားဖြင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့် CA. အကြားဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့ ရလဒ်ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်လိင်ကွဲယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းမှုအတွက်အစီရင်ခံသူတို့နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြပြီးကြောင့်ကျဘာကိုအသုံးပြုခြင်းမှအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအားဖြည့်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမီးမောင်းထိုးပြရာ, CA ၏သီအိုရီယူဆချက်၏နောက်ခံ, ဆန့်ကျင်ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်.